Articles by Htin Kyaw Lwin
မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ကြေးက အချိုအချောင်ဈေးလို့ဆိုခဲ့တဲ့ ဂျွန်နီအီဗန်
September 13, 2019 Htin Kyaw Lwin 0
နောက်ခံလူမက်ဂွိုင်းယားအတွက် ခံစစ်မှူးတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ကြေးဖြစ်တဲ့ ပေါင်သန်း 80 အထိ မန်ယူအသင်းကပေးချေခဲ့ရပေမယ့် ကစားသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် အချိုအချောင်ဈေးမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဂျွန်နီအီဗန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အသက် 31 နှစ်အရွယ် အီဗန်ဟာ 2006 ကနေ 2015 အထိ မန်ယူအသင်းမှာကာလရှည်ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ဘောလုံးရာသီက လက်စတာအသင်းမှာလည်း မက်ဂွိုင်းယားနဲ့အတူတွဲကစားခဲ့ရသူပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မက်ဂွိုင်းယားရဲ့အရည်အချင်းကို […]
မန်ယူဆီပြန်လာရေးအတွက် သူ့ရဲ့သဘောထားကိုဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ ဗန်ဒါဆား
မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုများစွာရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားဟောင်းဗန်ဒါဆားက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ရပ်ဝန်းဆီ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်ပြန်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် မန်ယူရဲ့ အရေးပါတဲ့ရာထူးမှာ တစ်ကျော့ပြန်မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ အသက် 48 နှစ်အရွယ် ဗန်ဒါဆားဟာ 2005 ကနေ 2011 အထိ မန်ယူအတွက် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် 266 ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား4ကြိမ်၊ […]
September 11, 2019 Htin Kyaw Lwin 0
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအတွင်း မန်ယူကနေ အင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် ဂိုးသွင်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးလူကာကူဟာ ဒီရာသီမှာ ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှူးစီရော်နယ်ဒိုရဲ့သွင်းဂိုးအရေအတွက်ကို အသာလေးကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ နယ်သာလန်ကစားသမားဟောင်း ဗန်ဒါမေဒီက သုံးသပ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်ကို ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း 80 နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ လူကာကူဟာ စီးရီးအေအဖွင့်2ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းယူကာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မန်ယူမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် အင်တာကိုရောက်တာနဲ့ […]
မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ ယူရို 2020 ခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ5ဂိုးထပ်မံသွင်းယူပြီး တိုက်စစ်အစွမ်းပြခဲ့ပေမယ့် ကိုဆိုဗိုလိုပြိုင်ဘက်မျိုးကို3ဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရတာကြောင့် ခံစစ်ကစားပုံပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်လွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပါတယ်။ အင်္ဂလန်ဟာ ယူရိုခြေစစ်ပွဲ4ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ4ပွဲစလုံးနိုင်ကာ 12 မှတ်ရထားပြီး သွင်းဂိုး 19 ဂိုးအထိလည်းရယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ […]
September 7, 2019 Htin Kyaw Lwin 0
စနေညကကျင်းပခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီ အမျိုးသမီးအသင်းနှစ်သင်းရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာ မန်စီးတီးက မန်ယူကို 1-0 နဲ့အနိုင်ရပြီး သူတို့နှစ်သင်းအကြား သမိုင်းဝင်ဒါဘီပွဲမှာ ပထမဆုံးအနိုင်ရသူအဖြစ် မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအမျိုးသမီးအသင်းဟာ 2018 ကမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ရာသီက အင်္ဂလန်အမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်မှာ အဆင် 1 နေရာရပ်တည်ကာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသမီးစူပါလိဂ်ကို တန်းတက်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ စနေညက မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်ဟာ […]
အင်္ဂလန်က ဘူလ်ဂေးရီးယားကို 4-0 နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ၀င်ဘလေကွင်းက ယူရို 2020 ခြေစစ်ပွဲစဉ်ဟာ လူငယ်ကွင်းလယ်လူမေဆန်မောင့်အတွက်တော့ ဘယ်တော့မှမေ့လို့မရနိုင်မယ့် လက်ရွေးစင်ပွဲဦးထွက်ဖြစ်ခဲ့သလို အဲဒီပွဲစဉ်မှာပဲ ချဲလ်ဆီးလူငယ်အကယ်ဒမီတုန်းက ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနဲ့လည်း ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အသက် 20 အရွယ် မေဆန်မောင့်ဟာ ဒီရာသီမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကာ နည်းပြလမ်းပတ်ရဲ့ဦးစားပေးကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း […]
ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းဟာ နည်းပြဂျာဗီဂရာစီယာကို ရာထူးကနေထုတ်ပယ်ပြီးနောက် မိနစ် 30 အကြာမှာပဲ နည်းပြဟောင်းဆန်းချက်ဇ်ဖလောရက်စ်ကို တစ်ကျော့ပြန်ခန့်အပ်လိုက်ပြီလို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အသက် 49 နှစ်အရွယ် ဂရာစီယာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၀က်ဖို့ဒ်ကို အက်ဖ်အေဖလားမှာ ဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်စေခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း ကလပ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အမြင့်ဆုံးရပ်တည်မှုအဖြစ် အဆင့် 11 နေရာရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ […]
ဟယ်ရီကိန်းထက် ပိုပြီးဂိုးသွင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးရက်ရ်ှဖို့ဒ်
မကြာသေးခင်က အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းလိုစိတ်ရှိမှုအပေါ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်းမိုက်ကယ်အိုဝင်က ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်မှုရှိခဲ့ပေမယ့် ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ကတော့ သူဟာ ကစားဖော်ဟယ်ရီကိန်းနဲ့အပြိုင် ဂိုးသွင်းယူလိုသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ဟာ အင်္ဂလန်အတွက် 32 ပွဲပါဝင်ကစားပြီး7ဂိုးသာသွင်းယူထားနိုင်သူပါ။ မန်ယူအတွက်လည်း ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် 174 ပွဲမှာ 47 ဂိုးသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူနည်းပြဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်ကလည်း ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားမရဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်။ […]
September 6, 2019 Htin Kyaw Lwin 0
သြဂုတ်လအတွက်ချီးမြှင့်တဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ တစ်လတာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို တောင်ပံကစားသမား ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ကဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ချန်ပီယံရှစ်ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်စွန့်စားခန်းက များစွာလှပကောင်းမွန်ခဲ့ပြီလို့ ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက တင်စားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ အသက် 21 နှစ်အရွယ် ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကလပ် ဆွမ်ဆီးကနေ မန်ယူကိုပေါင် 15 သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖိအားတွေကိုအကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကာ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ချက်ချင်းပဲခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သူပါ။ သူဟာ ချဲလ်ဆီးကို4[…]
ဘာစီလိုနာရဲ့ MSN နဲ့အပြိုင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော် BBC တိုက်စစ်အလုပ်ဖြစ်အောင် သူက စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာလို့ တိုက်စစ်မှူးဘင်ဇီမာက ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒို၊ ဂါရတ်ဘေးလ်နဲ့ ဘင်ဇီမာတို့3ဦးပေါင်း BBC တိုက်စစ်ဟာ ဘာစီလိုနာက မက်ဆီ-ဆွာရက်ဇ်-နေမာအတွဲနဲ့အပြိုင် ဥရောပဘောလုံးလောကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်3း[…]
အောငျပှဲခံတဲ့ပုံစံကွောငျ့ ယူရို ၃၀၀၀ ဒဏျရိုကျခံရဖှယျရှိတဲ့ မကျဆီ November 30, 2020
ပရီမီးယားလိဂျမှာ နိုငျပှဲရလို ပြျောရမယျ့အခြိနျမှာ ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့ပှဲကို မနျယူကစားသမား ၆ ဦးအထိ လှဲခြျောနိုငျဖှယျရှိနေ November 30, 2020
၂ပှဲဆကျ တညျကနျဘောတှကေို တားဆီးနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ ဒီဂီယာက နံပါတျ၁ဂိုးသမားနရော အဆုံးသတျခွငျးရဲ့ အစပိုငျးကို ရောကျနပွေီလား? November 30, 2020
ပရီးမီးယားလိဂျ ပထမဆုံး ပှဲထှကျခှငျ့ ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ဗနျဒီဘိချ ပေါ့ဂျဘာနရောကို ခွိမျးခွောကျနိုငျပွီလား November 30, 2020
မနျယူသူရဲကောငျးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ရှိုငျကိနျးရဲ့ဝဖေနျမှုနဲ့မလှတျကငျးခဲ့တဲ့ ကာဗာနီ November 30, 2020
အောငျပှဲခံတဲ့ပုံစံကွောငျ့ ယူရို ၃၀၀၀ ဒဏျရိုကျခံရဖှယျရှိတဲ့ မကျဆီ
ပရီမီးယားလိဂျမှာ နိုငျပှဲရလို ပြျောရမယျ့အခြိနျမှာ ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့ပှဲကို မနျယူကစားသမား ၆ ဦးအထိ လှဲခြျောနိုငျဖှယျရှိနေ
၂ပှဲဆကျ တညျကနျဘောတှကေို တားဆီးနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ ဒီဂီယာက နံပါတျ၁ဂိုးသမားနရော အဆုံးသတျခွငျးရဲ့ အစပိုငျးကို ရောကျနပွေီလား?
ပရီးမီးယားလိဂျ ပထမဆုံး ပှဲထှကျခှငျ့ ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ဗနျဒီဘိချ ပေါ့ဂျဘာနရောကို ခွိမျးခွောကျနိုငျပွီလား
မနျယူသူရဲကောငျးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ရှိုငျကိနျးရဲ့ဝဖေနျမှုနဲ့မလှတျကငျးခဲ့တဲ့ ကာဗာနီ